IMathematika Izicelo zezibalo
Indawo ye-placebo yinkqubo okanye into engekho naluphiko lwamayeza. Iindawo zokuhlala zihlala zisetyenziselwa iimvavanyo zamanani , ngokukodwa ezo zibandakanya uvavanyo lokuxilonga imithi, ukwenzela ukulawula uvavanyo oluninzi ngangokunokwenzeka. Siza kujonga isakhiwo sezilingo kwaye sibone izizathu zokusebenzisa i-placebo.
Iingcamango ziquka amaqela amabini ahlukeneyo: iqela lokulinga kunye neqela lolawulo.
Amalungu eqela lokulawula abafumani unyango lokulinga kunye neqela lokulinga. Ngale ndlela, sikwazi ukuqhathanisa iimpendulo zamalungu kumaqela amabini. Naluphi na ulwahlulo esilubona kula maqela amabini lunokubangelwa kunyango lokulinga. Kodwa sinokuqiniseka njani? Siyazi ngokwenene ukuba umahluko ophawulekileyo kwimpendulo yempendulo yimbangela yonyango lokulinga?
Le mibuzo idibanisa ubukho bemimandla yokukhwela. Ezi ntlobo zeempembelelo zithonya impendulo yeempendulo kodwa zivame ukufihla. Xa sisebenzisana neemvavanyo ezibandakanya izifundo zabantu kufuneka sihlale sijonge ukutshintsha kwezinto. Ukuqulunqwa ngokucokisekileyo kokuzama kwethu kuya kunciphisa imiphumo yokuguqulwa kwemiba. Indawo ye-Placebos yindlela enye yokwenza oku.
Abantu banokuba nzima ukusebenzisana kunye nezifundo zokulinga. Ulwazi lokuba omnye umxholo wovavanyo kunye nelungu leqela lokulawula lunokuchaphazela iimpendulo ezithile.
Isenzo sokufumana iyeza kumgqirha okanye umongikazi unempembelelo enamandla kwengqondo kwabanye abantu. Xa umntu ecinga ukuba anikezelwa into eya kuvelisa impendulo ethile, ngamanye amaxesha iya kubonisa le mpendulo. Ngenxa yoko, ngamanye amaxesha oogqirha baya kunika i-placeboes ngenjongo yokwelapha, kwaye banokuba unyango olufanelekileyo kwimibandela ethile.
Ukunciphisa nayiphi na imiphumo yengqondo yezifundo, i-placebo inokunikezelwa kumalungu eqela lolawulo. Ngale ndlela, yonke isihloko yesilingo, kumabini olawulo kunye namava okuhlola, iya kuba namava afanayo ekufumaneni oko bacinga ukuba imishanguzo evela kwizengcali zempilo. Oku kunenzuzo eyongezelelweyo yokungabonakali kwinqanaba ukuba ukhona kwiqela lokuhlola okanye elilawulayo.
I-placebo yenzelwe ukuba ibe kufuphi neendlela zokulawula unyango lovavanyo njengoko kunokwenzeka. Ngaloo ndlela i-placebos inokuthatha kwiifom ezahlukeneyo. Ekuvavanyeni kweziyobisi ezintsha, i-placebo inokuba yi-capsule ene-inert substance. Le nkunkuma iya kukhethwa ukuba ingabi naluphi utywala kwaye ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yimpilisi yeshukela.
Kubalulekile ukuba indawo ye-placebo ifane nokunyango lwezilingo ngokukhawuleza. Oku kulawula ukuvavanya ngokubonelela ngamava afanayo kuwo wonke umntu, kungakhathaliseki ukuba yiliphi iqela elingaphakathi. Ukuba inkqubo yokupasa ingonyango yeqela lokulinga, i-placebo yamalungu eqela lokulawula ingathatha ifom yokuhlinzwa . Esi sifundo siya kuhamba kuyo yonke imalungiselelo kwaye sikholwe ukuba wayesebenza, ngaphandle kwenkqubo yokucwangcisa eyenziwa ngokwenene.
Yintoni i-Bootstrapping kwi-Statistics?
Izibalo kunye nezoPolitiko zezoPolitiko
I-Mermaid efile efumaneka kwi-Philippines Hoax